Weeraro culus oo lagu qaaday Saldhigyada Al-Shabaab ee J/Hoose. – Idil News
Weeraro culus oo lagu qaaday Saldhigyada Al-Shabaab ee J/Hoose.
Faah-faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ah ciidamada DANAB ee Kumaandooska Soomaaliya ku qaadeen Saldhigyo Milateri oo ay dagaalmayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen degmooyin ka tirsan gobalka Jubada Hoose.
Xubno ka tirsan kumaandooska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ay beegsadeen Saldhig milateri oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Bu’aale oo kamid degmooyinka ay ku xoogan yihiin.
Sidoo kale ciidamada Soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ah waxay xalay weeraro kale ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobalka Jubada Hoose, iyo tuulada Jameeca ee gobalka Shabeelada dhexe oo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen ciidamo ay uga hortagaan abaabul dagaal oo ay wado dowladda Soomaaliya.Valueimpression Placeholder